लुडो खेलमाथि भारतको उच्च अदालतमा रिट दायर, मोबाइलमा खेल्नेलाई कारबाहीको माग! - Pura Samachar
लुडो खेलमाथि भारतको उच्च अदालतमा रिट दायर, मोबाइलमा खेल्नेलाई कारबाहीको माग!
लुडो खेलको विषयमा लिएर भारतस्थित बाम्बे उच्च अदालतमा एक रिट दायर भएको छ। उक्त रिटमा निवेदकले यस खेललाई कौशलको खेल नभई भाग्यको खेल घोषणा गर्न माग गरिएको छ। लुडोसम्बन्धी परेको यस रिटमा २२ जुनमा सुनुवाई हुनेछ। महाराष्ट्र नव निर्माण सेनाका केशव मुलेले रिट दायर गरेका हुन्।
बोर्डमा खेलिने लुडो खेल हिजोआज मोबाइल एपमासमेत अत्याधिक खेल्न थालिएको छ। लुडो सुप्रिम एपमा मानिहरुले पैसा हालेरसमेत खेल्ने गर्छन्। भारतमा सुप्रिम एपमा खेलिने यो खेलमा प्रति व्यक्ति ५ रुपैयाँको दाउ लाग्ने र विजेताले १७ रुपैयाँ पाउने बताइएको छ। रिट निवेदकले लुडो जुवाका रुपमा फैलन थालेको आरोपसमेत लगाएका छन्। मुलेले मोबाइल एपमार्फत यस खेलमा संलग्नलाई कारवाहीको मागसमेत गरेका छन्।
केशव शुरुमा उनी वीपी रोड पुलिस स्टेसनसमेत पुगेका थिए। त्यहाँ प्रहरीले उनको मागमाथि कुनै सुनुवाई गरेन। त्यसपछि उनी माजिस्ट्रेट कोर्ट पुगेका थिए। त्यहाँ एफआइआर दर्ता नभएपछि उनी उच्च अदालत पुगेको बताइएको छ।